Irighiri Gear Manufacturer | Akwa mma & teknụzụ dị elu - Ever-Power
Mbido / Gear / Irighiri Gear
A na-ejikarị irighiri Worm mee ihe mgbe ọ dị mkpa mbelata nnukwu ọsọ. A na-ekpebi mbelata mbelata site na ọnụ ọgụgụ mbido ikpuru na ọnụ ọgụgụ nke ezé na ikpuru ikpuru. Ma irighiri Kwadobe nwere eji kọntaktị nke bụ jụụ ma n tche mepụta okpomọkụ na nwere dịtụ ala nnyefe arụmọrụ.
Ọtụtụ irighiri ikpuru nwere ihe na-adọrọ mmasị nke ọ nweghị ihe ọ bụla ọzọ nwere: ikpuru nwere ike gbanwee ngwa ngwa, mana gia enweghị ike ịgbanye ikpuru ahụ. Nke a bụ n'ihi na akụkụ dị na ikpuru ahụ pere mpe nke na mgbe gia ahụ gbalịrị ịgbagharị ya, esemokwu dị n'etiti gia na ikpuru na-ejide ikpuru ahụ.
Njirimara a bara uru maka igwe dị ka sistemụ na-ebufe, nke njirimara mkpọchi nwere ike ime ihe dịka breeki maka onye na-ebufe mgbe moto anaghị agbanye. A na-eji otu ụzọ na-adọrọ mmasị nke irighiri ikpuru na ụfọdụ ụgbọ ala na nnukwu ụgbọala.
Banyere ihe maka imepụta ihe, n’ozuzu ya, eji ihe siri ike mee ikpuru ka a na-eme ikpuru ikpuru site na igwe dị nro dịka ọla nchara. Nke a bụ n'ihi na ọnụ ọgụgụ nke ezé dị na ikpuru bụ nke dị elu ma e jiri ya tụnyere ikpuru ya na ọnụ ọgụgụ ya na-amalitekarị ịbụ 1 ruo 4, site na mbenata ike irighiri ikpuru, esemokwu nke ezuru ikpuru na-ebelata. Njirimara ọzọ nke ikpuru ikpuru bụ mkpa nke igwe pụrụ iche maka ịkpụ na ịmị ire ezé nke ikpuru. Ekpuru ikpuru, n'aka nke ọzọ, enwere ike iji igwe hobbing eji mee ihe. Mana n'ihi ụdị ezé dị iche iche, ọ gaghị ekwe omume igbutu ọtụtụ gia n'otu oge site na ịkwado oghere ndị ahụ dịka enwere ike ịme ya.
Ngwa maka irighiri worm gụnyere igbe gia, ogwe osisi ịkụ azụ, ụbọ akwara na-akụzi akara, yana ebe mgbanwe ọsọ ọsọ siri ike site na iji nnukwu ọsọ ọsọ chọrọ. Ezie na ị nwere ike bugharia worm gear site na ikpuru, ọ naghị enwekarị ike igbanye ikpuru site na iji irighiri irighiri. Nke a na-akpọ onwe kpochidoro atụmatụ. The onwe kpochidoro atụmatụ ike mgbe niile na-obi ike na a iche iche usoro na-atụ aro maka ezi mma agbara mgbochi.
Ọzọkwa e nwere duplex irighiri gia ụdị. Mgbe ị na-eji ndị a, ọ ga-ekwe omume ịhazigharị azụ azụ, dị ka mgbe ezé ezé chọrọ mgbatị azụ azụ, na-achọghị mgbanwe na etiti anya. Onweghi otutu ndi na emeputa ihe puru iru udi ihe a.
A na-akpọkarị irighiri irighiri ahịhịa ikpuru.
Igosi 1-32 nke 58 utịp
micro irighiri gia set
bras ikpuru wheel
ikpuru gia pinion
obere ikpuru gia tent
gia idide wheel
otu ikpuru mmalite
multi mmalite irighiri gia
okpukpu abụọ na-ekpuchi ikpuru
abuo threaded worm gear
Ugboro abụọ mmalite ikpuru gia
irighiri ihe ikpuru
cnc irighiri gia
worm wheel na-emepụta ya
omenala ikpuru gia
irighiri ihe na-ekpuchi ikpuru
otu mmalite ikpuru gia
igwe anaghị ata nchara ikpuru gri
metric worm gia
enveloping ikpuru gia
ntuziaka ikpuru gia
irighiri ihe na-egbu egbu
ikpuru ikpuru na ikpuru osisi
irighiri na pinion gia
irighiri ihe irighiri
nkenke ikpuru gia
diy worm gia
ghoboid worm gear